Momba anay - Dingzhou Longxiang Hardware Products Co., Ltd.
izahay dia manokana amin'ny fanamboarana sy fanondranana ny tariby fefy sy ny vokatra tariby nandritra ny taona maro.
Izahay dia nanomboka tamin'ny taona 2004, manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy ny fanondranana fefy tariby sy vokatra tariby nandritra ny taona maro.
Ny vokatray lehibe indrindra dia: Netting Wire Hexagonal Winforced, Welded Wire Mesh, Chain Link Fence, Fefy Panel Ary Fitaovana, Wire Galvanized Etc. Ampiasaina betsaka amin'ny solika, indostria simika, fikarohana siantifika, injeniera, fitsaboana, fiaramanidina, fiaramanidina, Làlam-by, lalamby, milina, elektronika, lamba, metallurgy, harena ankibon'ny tany, fambolena sy saha maro hafa.
Ny orinasanay dia afaka mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa ihany koa, manafatra famaritana samihafa momba ny vokatra efijery.
Nandritra ny taona maro, ny orinasa dia manenjika ny orinasan-tsoratry ny "fahavelomana amin'ny kalitao, ny fampandrosoana amin'ny laoniny", ary mitazona fahombiazana tsara eo amin'ny indostrian'ny efijery ary mahazo fahatokisana amin'ireo mpampiasa vaovao sy taloha. Raha ilaina dia tongasoa izahay hifandray aminay amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkala na fifampidinihana an-tariby, dia faly izahay manompo anao. .
Ho an'ny vokatra avy amin'ny orinasanay, ireo mpampiasa dia tokony hanatanteraka, hametraka, hihazakazaka, hampiasa ary hitazona mifanaraka tsara amin'ny torolàlana momba ny motera sy ny teny mazava. Ny tsy fahombiazana dia fantatra ho olan'ny kalitaon'ny vokatra, ny orinasa anay no hamaha izany ho anao.
Ny tsy fahombiazana sy ny fatiantoka nateraky ny kalitaon'ny vokatray.tsy tompon'andraikitra ny orinasanay
Miorina amin'ny vokatra misy kalitao avo lenta, vidin'ny fifaninanana, ary serivisinay isan-karazany, nanangona tanjaka sy traikefa matihanina izahay ary nanangana laza tsara eo an-tsaha. Miaraka amin'ny fivoarana mitohy, manolo-tena tsy ny orinasan-trano sinoa fotsiny izahay fa ny tsena iraisam-pirenena koa. Enga anie ianao hifindra amin'ny vokatra avo lenta sy ny serivisy mafana. Andao hanokatra toko vaovao ho an'ny tombontsoa sy ny fandresena roa.